Ataovy izay hahatanteraka ny nofinofinao ao Lahore. Ny fananana ao amin'ity toerana ity dia fivarotana iray tanteraka, izay miampy. Raiso aminay izany fa tsy mora ny Flat tahaka ity. Noho izany dia tokony horaisinao ilay tolotra mbola azonao atao, alohan'ny hanaovan'ny olon-kafa iray. Afaka manome toky izahay fa tsy misy trano tsara kokoa azo hofaina amin'ny toerana iray manontolo. Matokia anay, ho mafy orina ianao hahita tolotra fananana mitovy amin'izany izay latsaka eo akaikin'ity elanelam-bidin'ny 25000 Rs ity. Ny trano dia mandrakotra faritra 788 Kongo toradroa izay habe mety indrindra ho an'ny fianakaviana rehetra. Raha te hahalala bebe kokoa amin'ny tolotra dia mifandraisa aminay.
Fareed Malik Aamir Malik